Gamba reWTN Kutungamira Barbados Tourism: Jens Thraenhart, iyo Nyowani CEO weBTMI
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bharabhasi Kuputsa Nhau » Gamba reWTN Kutungamira Barbados Tourism: Jens Thraenhart, iyo Nyowani CEO weBTMI
Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Wtn
Barbados inzvimbo yakakosha, uye maBarbadani vanhu vakasarudzika vane nyaya zhinji dzekutaura. Munyori mukuru wenyaya akaziviswa nhasi. Jens Thraenhart, achatora basa reBarbados Tourism Marketing (BTMI) kubva munaNovember 1, ingori nguva yeWorld Travel Market.
Mavhiki mana apfuura, weCanada / wechiGerman Jens Thraenhart akaitwa Gamba Rekushanya neWorld Tourism Network.
Kwemakore mazhinji, VaTraenhart vaive Director weMekong Tourism uye kusvika svondo rapfuura yaive muBangkok, Thailand.
Nhasi, Jens Thraenhart akagadzwa kutungamira Barbados Tourism
Iye zvino murume anozivikanwa saVaMekong ndiye mutsva weBarbados Tourism Marketing Inc. (BTMI) Chief Executive Officer.
Kubva Bangkok kuenda kuBarbados, ichi chichava chitsva chakakomberedza chaJens Thraenhart nemhuri yake.
Iye ndiJens Thraenhart, murwi wezvekushanya ane makore makumi maviri nematanhatu, uyo "akabuda semumiriri wepamusoro kubva pagungwa rekutanga revatambi vanosvika zana nemakumi manomwe nevasere vevadzidzi vane hunyanzvi kubva pasirese" rakadaro sangano mukuburitswa.
Ane makore anopfuura makumi maviri nemashanu ekufamba kwenyika, kushanya, uye kugamuchira vaenzi ruzivo rwekutora nzvimbo munzvimbo dzekushanda, kushambadzira, kusimudzira bhizinesi, manejimendi manejimendi, kuronga kwehunyanzvi, uye e-bhizinesi. Pakutanga kwebasa rake, Jens 'bhizimusi kumucheto akasimbiswa pamwe naye kuvamba nekushandisa yakabudirira chikafu chekudya kambani, kutanga New York-yakavakirwa yekuzorora yekufamba Internet kambani, uye manejimendi yakazvimiririra yakasarudzika gorofu nzvimbo kuGerman.
Muna 2014, Jens Thraenhart akasarudzwa neveTourism Ministries eThailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, neChina (Yunnan neGuanxi) kutungamira Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) seMutungamiriri wayo. Mu2008, akabatana-akunda mubairo-anokunda China dhijitari kushambadzira yakasimba Dhiraini Trail, uye akatungamira kushambadzira neInternet matimu echikwata neCanada Tourism Commission neFairmont Hotels & Resorts. Kubva 1999, ndiye anga ari iye CEO weChameleon Strategies.
Akadzidza paCornell University aine MBA-yakatenderwa Masters of Management in Hospitality, uye akabatana Bachelor of Science kubva kuYunivhesiti yeMassachusetts, Amherst, uye University Center "Cesar Ritz" kuBrig, Switzerland, VaThraenhart vakaonekwa semumwe we iyo indasitiri yekufambisa yakakwira nyeredzi zana neTravel Agent Magazine muna 100, yakanyorwa seimwe yeHSMAI's makumi maviri neshanu Anoshamisa Zvokutengesa nePfungwa dzeKushambadzira muKugamuchira Vaeni uye Kufamba muna 2003 na25, uye yakatumidzwa semumwe wePamusoro 2004 Anoshamisa Mafungiro muEuropean Travel. uye Kugamuchira Vaeni muna 2005. Ndiye UNWTO Affiliate Member, PATA Board Member, uye akapfuura Sachigaro wePATA China.
VaTraenhart vane huchokwadi hwepasirese hwepfungwa.
Kusarudzwa kweBarbados kunotanga musi waNovember 1.
Jens haana kumboshanda muCaribbean asi ari kuunza hutungamiriri hwepasi rose kuBarbados uye inonyanya kutsamira nharaunda yeCaribbean.
Juergen Steinmetz, Sachigaro we World Tourism Network, akanga ari mumwe wevokutanga kukorokotedza Jens nechinzvimbo chake achiti: “Uyu mukana wakaisvonaka kwete bedzi kuna Jens, asi weBarbados uye wokuCaribbean. Ndave ndichiziva Jens kwemakore mazhinji. Iyi yaigona kunge iri sarudzo iri nani. ”
Jens inhengo ye World Tourism Network uye chete 4 mavhiki apfuura akagamuchira iyo Tourism Magamba mubairo nesangano repasi rose.
"Iri izuva rakanaka kuBarbados neWorld of Tourism."
Barbados Tourism yakati: "Chiziviso ichi chichaunza nguva itsva yesangano, iyo ichaona shanduko yeBTMI kuenda kune rimwe bhizinesi rekushambadzira iro riri kugadzirisa mashandiro aro kuti rikwikwidze zvirinani munguva itsva yedenda rekushanya kwenyika."
Jens ndiye wechipiri mutevedzeri wasachigaro weAffiliate Members Board yeWorld Tourism Organisation (UNWTO) uye akashanda kumabhodhi emabhizimusi anosanganisira Pacific Asia Travel Association (PATA), iyo Hospitality Sales uye Marketing Association (HSMAI), uye International Federation yeIT uye Kufamba neKushanya (IFITT), ichiunza hukama hwakakura hwevabatiri mumisika yakakosha yekushanya kweBarbados.
Sachigaro weBTMI, Roseanne Myers, akati sangano iri rakatoita basa guru rekuvhura misika nekutanga hukama hwekutengeserana.
"Tinotenda kuti pamwe neruzivo rweJens rwekushanya kwepasirese, rekodhi rekodhi mukuita zano uye maonero ezvemabhizimusi, BTMI ichabuda kubva panguva ino yedenda kambani yakasimba kwazvo, inobudirira kushambadzira kwekuenda inounza rubatsiro rwakawedzerwa kuindasitiri yedu uye. upfumi hwakakura,” vakadaro.
"Isu takatora chinetso chekutsvaga munhu anokwanisa kukwikwidza pachinzvimbo cheECEO kuti abatsire kugadzira nzira inoenda kumberi, uye tinofara zvikuru kuti takaita izvi, mushure mekuita basa rakanyatsojeka. Tinogamuchira Jens kuchikwata cheBarbados. ”
Makumi maBarbadians uye 27 kubva kuCaribbean yakafara vaive pakati peva 178 vanyoreri. Nzira yekutsvaga nekusarudza yakaitwa neProfiles Caribbean Inc. uye diki-komiti yebhodhi uye vashandi veindasitiri. Sangano iri rakaitisawo mukana wekusvikira kune vekunze pamwe nevekunze veindasitiri vanobatsirana neBTMI.